एजेन्सी । दिदीभाई तथा दाजुभाईको माया सद्भावको प्रतीक रक्षाबन्धनको आफ्नै विशेष महत्व रहेको छ । जसमा साधारण व्यक्ति तथा सेलिब्रेटी सबैको माया भनेको एकै हुन्छ । यसै रक्षाबन्धनको क्रममा बलिउडका कलाकारहरुले राखी बाँध्दै केही कुरा शेयर गरेको छन् ।
१. कंगना रणाउत– ‘भाइले गिफ्ट मागिरहन्छन् ।’
२. प्रभास – ‘दिदीबहिनीको लागि कुनै लिमिट रहेको छैन ।’
३. श्रद्धा कपुर – ‘दाजु सँधै प्रोटेक्टिभ रहेका छन् ।’
४. ऋतिक रोशन – ‘त्यो उपहार दिनु जसले अगाडी कोही अफोर्ड गर्न सक्नेछ ।’
५. आयुष्मान – ‘राखी सम्बन्धी पोष्ट आइ नै रहन्छ ।’